ဘဝမှာ …မပူမပင် မကြောင့်မကြ…ေ..အးချမ်းစွာနေနိုင်မယ်. ဗုဒ္ဓယတြာ – ရှအေလငျး
ဘဝမှာ …မပူမပင် မကြောင့်မကြ…ေ..အးချမ်းစွာနေနိုင်မယ်. ဗုဒ္ဓယတြာ
ဘုရားတပည့်တော်၊ တပည့်တော်မ၏ ယ္ခုပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ် ဘဝတစ်လျှောက်လုံး စိုးရိမ်ပူပင်ကြောင့်ကြမှုအစုစုတို့သည် ဤမျက်နှာသစ်တော်ရေ၊ သောက်တော်ရေချမ်းကပ်လှူပူဇော်
လှူဒါန်းရသောစေတနာသဒ္ဒါတရားကြောင့် ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမပူမပင် မကြောင့်မကြ အေးချမ်းစွာနေထိုင်ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေသား အရှင်မြတ်ဘုရား။
နေ့စဉ်အမြဲတမ်း နံနက်တိုင်း ယုံကြည်စွာပြုလုပ်ပေးပါ။ယုံကြည်မှုဖြင့် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မှုသည် ယခု ဤဘဝတွင်သာ မကဘဲ နောင်ဘဝများစွာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး နောင်ပွင့်တော်မူမည့် အရိမေတ္တယျမြတ်စွာဘုရားရှင်ကို ဖူးတွေ့နိုင်ပြီး သာသနာပြုနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ထူးပုဂ္ဂိုဟ်မြတ်များဖြစ်ကြပါစေ။
ဘဒ်ဒကမ္ဘာတှငျ ပှငျ့တျောမူသော သဗ်ဗညုတမွတျစှာဘုရားကို ဘုရားတပညျ့တျော၊ တပညျ့တျောမသညျ မကျြနှာသဈတျောရနှေငျ့ သောကျတျောရခေမျြးကို သဒ်ဒါကွညျဖွူစှာ နိဗ်ဗာနျရညျမှနျး လှူဒါနျးပါသညျ အရှငျမွတျဘုရား။
ဘုရားတပညျ့တျော၊ တပညျ့တျောမ၏ ယ်ခုပစ်စုပ်ပနျ၊ အနာဂတျ ဘဝတဈလြှောကျလုံး စိုးရိမျပူပငျကွောငျ့ကွမှုအစုစုတို့သညျ ဤမကျြနှာသဈတျောရေ၊ သောကျတျောရခေမျြးကပျလှူပူဇျော
လှူဒါနျးရသောစတေနာသဒ်ဒါတရားကွောငျ့ ဘဝတဈလြှောကျလုံးမပူမပငျ မကွောငျ့မကွ အေးခမျြးစှာနထေိုငျဖွတျသနျးနိုငျပါစသေား အရှငျမွတျဘုရား။
နစေ့ဉျအမွဲတမျး နံနကျတိုငျး ယုံကွညျစှာပွုလုပျပေးပါ။ယုံကွညျမှုဖွငျ့ ကိုးကှယျဆညျးကပျမှုသညျ ယခု ဤဘဝတှငျသာ မကဘဲ နောငျဘဝမြားစှာ တညျငွိမျအေးခမျြးပွီး နောငျပှငျ့တျောမူမညျ့ အရိမတ်ေတယမြွတျစှာဘုရားရှငျကို ဖူးတှနေို့ငျပွီး သာသနာပွုနိုငျသောပုဂ်ဂိုလျထူးပုဂ်ဂိုဟျမွတျမြားဖွဈကွပါစေ။
“ပဲခူးနယ် တစ်ဝိုက် တွင် အထင်ရှားဆုံး ပဲခူးမြို့ ရဲ့ ကျက်သရေဆောင် ” ရွှေမော်ဓော ဘုရားသမိုင်း “
မိဘတွေ ကလေးကို ဖုန်းပေးသုံးရင် သတိထားကြပါ ဒီလိုဖြစ်လာရင် ကြောက်စရာပဲ 😥
” ပန်းသေ၊.. ပန်းညှိုး အပြင်… မြွေဆိပ်ပါ ဖြေနိုင်တဲ့… ခွေးလှေယားသီး …အနက်စေ့အစွမ်း …(မယုံမ၇ှိနဲ့ နော် လက်တွေ့) “
မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်မှုကြောင့် Apple ကို လျော်ကြေး ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ကျော်...
တစ်သားမွေး၊ တစ်သွေးလှလာတဲ့ ခေးမေ ယွန်းလေးရဲ့ အလှကို ချီးကျူးလိုက်တဲ့...